OBS: Qophii harka fuunee Dr. Eebbisee Addunyaa, Doctora Herregaa waliin |
OBS – Qophii harka fuunee Dr. Eebbisee Addunyaa, Doctora Herregaa waliin waliin
Guraandhala 23, 2020
Isheen Eenyu 4: ‘Herreega waliin akka tasaa wal jaalanne’
Sadaasa 28, 2019
(BBC Afaan Oromoo) — Barnoota Herregaan kaadhimamtuu PHD dha. Gosa barnootaa namoonni badaa itti hin cichine kanatti akkamiin milkaa’uu akka dandeesse nutti himteetti. Nuu dhiyaadhaa.
Maqaan koo Eebbisee Addunyaa jedhama. Naqamteettin dhaladhee guddadhe. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Haaromaayaatti, kan lammataa Yunivarsiitii Hawaasaatti barnoota PHD ammoo Yunivarsiitii Deenmaarkiifi Hawaasaa gidduuttan barachaa jira.
Herregni si filatemoo ni filatteen?
Egereen koo herreega taha jedhee yaadee hin beeku. Barnoota digrii jalqabaatiif Yunivarsiitii Haaromaayaatti yeroon ramadame, Herregni akka carraa na gahe, filadhee miti.
Ergasii booda garuu anaafi herregni baayyee wal jaalanne. Anatu isa filate tahee isatu na filate tahee hin beekamu.
Barnoota herregaa durumaa sodaadhee hin beeku. Yunivarsiitiitti gaafa na qaqqabu immoo qabxii gaarii galmeessisuu jalqabnaan itti gammadaan dhufe.
Ilaacha ”kuni dubaraaf ni ulfaataa kunimmoo dhiiraaf ni mijata jedhu hin qabu.
Eenyuyyuu fedhii qabaannaan irratti immoo tattaaffii fi hojii daballaan hinuma taha jedhee gatiin yaaduufi anis akkasumattin itti fufee hanga kanaatti gahe.
Ammas barnootan jaaladhu keessaa isa guddaafi isa jalqabaati.
Gabatee herreegaa irratti akkami?
Ijoollummaa kootti ‘gizee beetii’ kana nan hojjedha garuu isa ijoolleen sammuutti qabatanii dafanii dafanii deebisan kana hin danda’u ture.
Elemantariittis abbaan koo barsiisaa Herregaa gatii taheef herreegatti beekumsa gahaa akkan qabaadhu na gargaara ture.
Sammuu kootti qabachuurra isa abbaan koo naa ibsu hubannaatiin qabadhee herrega shallaguutu irra naa salphata.
Herregni maal nu fayyada?
Herreegni faayidaa adda addaa qaba. Dursa herregni, ”Pure mathematics fi applied mathematics” jedhamuun bakka lamatti qoodama.
Inni ani barachaa jiru ‘Applied mathsn’ rakkoo qabatamaan jiru hiikuuf waan gargaaru dha. Fakkeenyaaf ani dhukkuba tiruu HCV virus jedhamu irrattin qorannoo koo hojjechaa jira.
Kanaaf herreegni rakkoo qabatama jireenya keenya keessa jiruuf furmaata barbaada.
Waan bor tahuuf jiru illee tilmaamanii akkasiifi akka sana jechuuf herreegni rakkoo keenya lakkofsaan nuuf shallaga jechuu dha.
Warri ogummaa herregaa qaban lakkoofsa qooyyabanii, shallaganii furmaata isaa waliin lafa kaa’uu.
Warri ogummaa Injiinariingiifaa qaban immoo hojii isaanii keessatti faayidaarra oolchuu jechuu dha.
Kanaaf nama herreegaa caalaa Injinariin tokko faayidaa herreegaa sitti himuu danda’a jechuu dha.
Bu’aa ba’ii akkamiin baata?
Akka dubartii tokkootti keesumaa immoo biyya keenyatti danqaa addaa addaa nan qabaadhaa. Garuu hanga danqaa sanaa osoo hin taane hamma humna koon of madaaala.
Anaaf danqaan yookiin rakkkoon akka na cimsuufi jabeesse na dhaabu ijaan beekuuf qaawwan keessa hulluuqee bahun barabaada.
Namoonni yeroo tokko tokko fuula kee qofa ilaalanii si tilamaamu. Keessattuu umrii keefi dubartummaa keetiin si madaalu.
Ani yeroo akkasii kanatti ofin beeksisa, maal akkan gochuu danda’uu, eenyu akkan tahe nan hima, fedhiin koo maal akka tahe iddoo barbaachisaa tahetti nan dubbadha.
Kun immoo wantan barbaadu akkan argadhu na taasiseera.
Dabalataan immoo barumsa koon cinatti ‘sociable dha.’ Yeroo digirii lammaffaa, sadaffaa barataa dhuftu yeroon si hanqata, garuu ani isuma keessaa wal madaalchisee maatii kootis tahe hiriyyoota koo waliin yeroo nan dabarsa.
Barnooti PHD immoo yerootti nyaata nyaattullee siif hin kennu, mukaa’uu fi dhiphachuun jiraa, isuma keessaa yeroo ofii seeraan fayyadamnaan fiixaan bahuun ni danda’ama jedheen amana
Jaalalaa fi PHD
Akkuma beekamu aadaa biyya keenyatti dubartiin yonnaa caaltu dhiirri keenyi hin jaalatu. Ani hundaan jechaa hin jiru, garuu ilaalchi akkasii ni jira.
Dhiirri waan hundaan olaanaa tahee akka mul’atu kan barbaadan jiru.
Ani akka kootti jaalalaafi sadarkaan ati qabdu addaa garaadha. Sababii kanaaf namni milkaa’inni koo rakkoo itti tahu jiraannaan hin keessumsiisu.
Barumsi koo milkaa’ina kooti kanarratti maatiin koo baayyee na gargaaru. Jaalalleen yookiin hiriyaan ani qabaadhus milkaa’ina koo irratti nama na deeggaru tahuu qaba.
Isheen maaliif na caalti jennaan, jaalalamoo hinaaffaa tahaa jechuudha.
Dubartoonni aangoo qabnu hin hubanne
Eebbisee Addunyaa Herrega akka tasaa jaallatte hanga PhD’tti qoratte
Ani dubartoonni aangoo qabnu waan hubanne natti hin fakkaatu. Ni goona jennee amannaan gochuu ni dandeenyaa.
Isa kana immoo hubannaan, bareedinaan murtaa’uu hin qabnuu, heerumaan murtaa’uu hin qabnuu,qabeenyaan murtaa’uu hin qabnuu iddoo guddaatti of madaaluu qabna.
Danqaa nu mudatu immoo ofii keenyaan darbuu danda’uu qabna. Kanaan fuulfuratti yoo tarkaanfanne biyyas tarkaanfachiisuu ni dandeenya.
Aangoo fi mala qabnutti haa fayyadamnu jedheen dubartoota keenya gorsa.
*Odeessi ‘Isheen Eenyu?’ jedhu seenaa dhuunfaa, muuxannoo, milkaa’inaafi bu’aa bahii dubartoota jajjaboo garagaraa BBC’n dubbise torban torbaniin gaafa Kamisaa kan dhiyeessudha.
Previous articleWhat do Abiy Ahmed, Michael H. Raynor, Isayas Afeworki and unitarist Ethiopian elites have in common regarding Oromo nationalism?
Next articleAbiy’s Bid to Reconcile Somalia Hits a Wall